Ileta evela Team Management
MTP-MPO Multi-Imisonto Solutions
Iindibano zee-Cable ze-MTP-MPO
Isidlulisi seVidiyo yedijithali
Fiber Umthambo Umsi Components
Fiber isinxibelelanisi optic
Fiber kagesi optic
Fiber attenuator optic
Ifayibha optic patch intambo
Cable Management and ebiyelweyo
Ngumhloli and Izixhobo
INTCERA ebesoloko Brand entsha Fiberconcepts 'ukususela kwiminyaka eyadlulayo. Fiberconcepts kuyinto ephambili umvelisi ehlabathini umniki premium isixando fibre amacandelo optic ngokukodwa networks ezibalulekileyo ngokupheleleyo. Amacandelo ethu kunye nezisombululo enokufunyanwa kwizicelo e amashishini, urhulumente kunye nabanye kulo lonke ihlabathi. Fiberconcepts, yasungulwa ngo-2002 kwaye izinze Shenzhen, China.
Fiberconcepts uye wasebenzisa ubuchule olomeleleyo zobugcisa ukwenza portfolio imveliso INTCERA. Kude kube ngoku, Fiberconcetps iye yaba yinto umthombo omnye jikelele esebenzayo yeziXhobo zava uqhagamshelwano optical.
Ibali yethu impumelelo ilula: izidingo zabathengi kunye iimveliso ezisemgangathweni zithunyelwa kwangexesha, lonke ixesha ngexabiso elifanelekileyo a inkonzo ekumgangatho ophezulu. Ngenxa sikufuna umgangatho imveliso kunye nokusebenza, siye saseka zexesha elide intsebenziswano obazakunceda lamazwe womabini kunye nabathengi bethu emhlabeni
Njengokuba ubungqina oku kuzibophelela, sinika uluhlu olubanzi lweenkonzo, kuquka inkxaso isicelo, uqeqesho imveliso, inkxaso yobugcisa kunye noncedo ufakelo.
iimveliso Fiberoncepts ukuqhagamshela amashishini, urhulumente kunye nabanye kunye nezisombululo unique uqhagamshelwano yokusebenza eliphezulu inkxaso ziinkonzo abazinikeleyo kunye noqeqesho. iimveliso isiseko lwabathengi trust zethu jikelele Fiberoncepts 'kwaye iminyaka engaphezu-10 siye eziyilwe imveliso ngamnye ukubahlangula kanye njengoko wakuthethayo; ixesha ngalinye ukusabela ngokukhawuleza kunye bhetyebhetye nokuba nemfezeko. Abathengi ngokukhetha Fiberoncepts baye emsebenzini ngokusondeleyo iqela lethu yeengcali abazinikeleyo kukuvuyela ukunceda kwinqanaba ngalinye kule nkqubo. ulwazi lwethu nobuchule kuya kukunceda ufumane isicombululo uqhagamshelwano ufuna.
Fiberconcetps lizinikele ekunikeni inkonzo ingqalelo yomthengi kunye nenkxaso, ukunikezelwa kukuzila isiseko solwazi imveliso eqala ngaphezu kweminyaka eli-10 yamava.
Ukuba ungumthengi ekhoyo, ukuba ubazi unikezelo ngokukhawuleza, ulwazi imveliso, ukuqinisekisa umgangatho, yaye inqanaba eliphezulu lenkonzo. Ukuba umthengi entsha, qhagamshelana nathi nceda, uya wakholiswa ezisemgangathweni kunye nenkonzo yethu.
Ngoko ke, njengokuba ubungqina oku, siyakwazi ukwenza INTCERA uba lophawu edumileyo kungekudala na.
MTP 12f 24F 36F 48F 96F Patchcords , MTP Cable uPatch intambo , MTP Patchcords , MTP SM MM OM4 Patchcords , MTP To LC cassettes , nokwehlukana Ukugcina MTP-MTP uPatch intambo ,